फेरि दोहोरियो रुकम घ’टना ! क्षत्री को छोरी संग विक को प्रेम; प्रेमिकाको भयो यसरी निधन (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/फेरि दोहोरियो रुकम घ’टना ! क्षत्री को छोरी संग विक को प्रेम; प्रेमिकाको भयो यसरी निधन (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कथित उपल्लो जात भनिएकी एक युवतीसंग प्रेम गरेको अभियोगमा एक युवकले फेरी रुकुम घ/टना झै या’त’ना पाएका छन् । युवकलाई या’त/ना दिएको देख्न नसकेर उनको प्रेमिकाले संसार छोडेकी छन् युवकलाई आफ्ना परिवारले या’त’ना दिएपछि प्रेमिकाले संसार छोडेकी हुन् । घटना भएको भोलीपल्ट उनले जिवन त्या/गीन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रेमिकाले भेट्न बोलाएर उनको घरमै भेट्न गएका अछामका प्रकाश टमटालाई युवतीको परिवारले देखे । त्यसपछि उनलाई कपाल मु’ण्ड’न गरिदिए, धेरै जना मिलेर या’त/ना दिए । त्यो अवस्था देख्न नसकेर प्रेमिकाले जिवन त्या/ग गरेको युवकले बताएका छन् ।
प्रकाश टमटाको केशरी रावलसंग प्रेम थियो । ३ वर्ष देखिको प्रेम गाउँमा सबैलाई थाहा थियो । केशरीका परिवारका सदस्यले पनि शंका त गरेका थिए, टमटा भन्छन ‘थाहा नभएको हुनसक्छ ।’ उनीहरुले विवाहको योजना बनाएका थिए । विवाह गर्न पैसा समेत जम्मा गर्न थालेका थिए । त्यो दिन पनि विवाहको योजना बनाउ केशरीले प्रकाशलाई भेट्न बोलाएकी थिइन् । उनीहरु कोठामा गफ गरेर बसेका थिए । त्यही बेलामा प्रकाशलाई केशरीका परिवारले देखे ।
जातिय छुवाछुत सम्बन्धी गा/ली गर्दै या’त/ना दिन थाले । उनलाई खेतमा ल्याए । त्यो सबै देखेकी प्रेमिकाले सहन सकिनन् र भोलीपल्ट जिवन त्या/ग गरेको प्रकाशले बताएका छन् । घटना भएको अहिले ५ दिन भयो । प्रकाशलाई केशरीको निकै याद आउँछ । विवाहको योजना बनाएका थियौं अहिले यस्तो भयो मलाई निकै याद आउँछ उनले भने ।
यो घ/टना अछाम रामारोशन २ मा यस्तो घ/टना भएको हो । युवक अहिले घाइते अवस्थामा छन् । उनी राम्रोसंग बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । तर यिनीहरु सानै उमेरका हुन् । युवक अहिले १७ वर्षका भए भने युवती १५ वर्षकी थिइन् । युवक अहिले घरमै बसेका छन् । उपचार गर्ने पैसा नभएकाले उनी घरमै बसेको युवकको आमाले बताएकी छन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सिन्धुपाल्चोक घ’ट’ना: श्रीमान,छोरा-बुहारी म’र्नु अघि यस्तो सम्म भएको रहेछ ,आमा धुरु धुरु रुदै मिडियामा(भिडियो)
५० बर्षे पातकी बुढोले २४ बर्षकी यति राम्री श्रीमती भगायो। ७ लाख र २ छोरि लिएर फरार (हेर्नुहोस भिडियो)